ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D HOT ပြုပြင်မွမ်းမံ ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 31 555
Size: 207 ကို MB
ဗွီဒီယိုတင်ဆက်မှု Boeing 737-MAX8 သည် Rikoooo တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီအံ့သြဖွယ်လေယာဉ်ပျံသန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ၎င်းကိုဖန်တီးသူ Hiroshi Igami (TDS) ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ၄၁ ခုအပါအ ၀ င်ဤကောင်းမွန်သောအထုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ၏မူလကို virtual cockpit နှင့်အတူပါဝင်သည် FSX 737-800 (3D 73 မရှိပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဟီရိုရှီ Igami (TDS) ကမော်ဒယ်လ်။ Philippe Marion မှ 2D Panels နှင့် VC ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ CFM LEAP သည် k-akai.blogspot.com မှစီစဉ်ထားသည်။ Rikoooo ကထုပ်ပိုး
KC-135 Stratotanker Package ကို Boeing FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 13 176
Size: 295 ကို MB
တစ်ပြည့်စုံအထုပ် FSX/ SP2 (Rikoooo အားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်အတူသဟဇာတ Prepar3D အပြည့်အဝ VC ကို panel ကနှင့်စန်းအခန်းနှင့်အတူ v4.5) ။ Ariel ဆီဖြည့များအတွက်ကာတွန်းစန်းပွင့်နှင့်ကင်မရာအမြင်များနှင့်အတူ multiplayer များအတွက် optimized ။ စံဆီဖြည့စန်း, drogue ပူးတွဲမှုနှင့်အတူစန်း, နှင့် MPRS syst ပါရှိသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဂယ်ရီဃ Shetter III ကို
727 Liveries နှင့်အတူဘိုးအင်း 200-154 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 96 016
Size: 365 ကို MB
ဤတွင်ဘိုးအင်း 727-200 VistaLiners ဖြစ်ပါသည် / အဲ Cantu မူလက FS2004 ဘို့ဘို့ကူးပြောင်း FSX & P3D။ ဤသည်စူပါအထုပ်အမျိုးမျိုးနှင့်နိုင်ငံအများအပြားကနေ 154 liveries တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဘဏ္ဍာကိုအတူရရှိနိုင်ပါ! ဤသည်ကျိကျိတက် pack ကိုသဟဇာတဖြစ် FSX / FSX-Steam Edition ကို / P3Dv1 v2 v3 v4 ။ ပြင်ဆင်ချက်ခဲ့ကြသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ VistaLiners, လင်းယုန် Rotorcraft Simulator ဖွငျ့ဇာတိပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်မော်ဒယ်များဒါဝိဒ်သည် Grindele, ပြင်ဆင်ချက်များတည်းဖြတ်သည်နှင့် Rikoooo အားဖြင့် repack
ပုဂ္ဂလိကဘိုးအင်း 727-31 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 12 541
Size: 98.7 ကို MB
အဆိုပါဘိုးအင်း 727-31 N908JE ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် add-on TDS ၏ထိပ်တန်း 727D မော်ဒယ် (Tenkuu Developers စတူဒီယို) အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်စိတ်ကူးအဆိုပါ USA.Complete အတွက်ကုမ္ပဏီ JEGE INC မှပိုင်သောတစ်ဦးတည်းသာ 31-3 ဖြစ်ပါတယ်မှတ်ပုံတင် သောမတ်စ်ရုသကို virtual cockpit ။ စစ်မှန်, FMC နှင့်အတူပါဝင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ TDS Tenkuu Developers စတူဒီယို, သောမတ်စ်ကရုသဖွငျ့ VC ကို, ယောရှုရာဖေးလ်အာဒံ Murphy တို့ကအသံများက texture တို့ကမော်ဒယ်။ Rikoooo စိတ်ကြိုက် pack ကို
ဘိုးအင်းကို C-32 လေတပ်နှစ်ဦး USAF FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 10 558
Size: 87.7 ကို MB
အဆိုပါဘိုးအင်းကို C-32 အဆိုပါ 757-200 ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ USAF စစ်ဘက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းသည်။ ဒါဟာလက်ရှိလေတပ်နှစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ (ဝီကီပီးဒီးယားအပေါ်နောက်ထပ်အင်ဖို) .Air တပ်မှနှစ်ဦးယူနိုက်တက်က S ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတမဟုတ်လျှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဒုတိယသမ္မတတင်ဆောင်လာသောကိုမဆိုအမေရိကန်လေတပ်လေယာဉ်ပျံကအသုံးပြုခေါ်ဆိုမှုလက္ခဏာသက်သေဖြစ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ TDS, Alejandro Rojas Lucena နှင့်ကဲန် Wiggington အားဖြင့် VC ကိုအားဖြင့်မော်ဒယ် Candyman အားဖြင့် repaint ။ အဘို့ပြင်ဆင်နှင့်စုဝေး P3D & FSX ခရစ်အီဗန်သည်။ အဆိုပါ screenshots များအဘို့ခရစ်အီဗန်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ
TDS ဘိုးအင်း 787, Mega Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 176 062
Size: 436 ကို MB
သီးသန့်! 787 repaints များအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဗူးနှင့်အတူဘိုးအင်း 82 မိသားစု, Mega-pack ကို FSX နှင့် P3D။ ဒီအထုပ်နှစ်ခုဗားရှင်းလည်းပါဝင်သည်ခြောက်လမော်ဒယ်များ (787-787RR နှင့် GEnx, 800-787RR နှင့် GEnx, 900-787RR နှင့် GEnx) ၏တစျခုလုံးကိုဘိုးအင်း 10 မိသားစုတို့ပါဝင်သည်။ ကြိမ်မြောက်တစ်ခုသာ 2D panel ကိုအတူတစ်ဦးကဗားရှင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ricardo_tv နဲ့ Chris အီဗန်တည်းဖြတ် Tenkuu Developers စတူဒီယို။ , G Munro အားဖြင့် 787 2d panel က။ Alejandro Rojas Lucena အားဖြင့် VC ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ Rikoooo အားဖြင့် Repack, ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်မွမ်းမံမှုများ
ဘိုးအင်း 747-8 ငှားရမ်း Retro Pack ကို liveries FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 38 688
Size: 655 ကို MB
က virtual cockpit.Texture တိုးမြှင့်မှုများအဘို့အ 747 high resolution ကတော့ (8px²) တွင်ထူးခြားသော repaints ပေါင်းသစ်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူလှပသောဘိုးအင်း 14-4096 တံခါးများ, သစ်ကိုပြတင်းပေါက်များ, သစ်ကိုအဆစ်အသစ်လိုင်းများ, အသေးစိတ်သစ်တာဘိုင်အသစ်ဘီးအသစ်လေယာဉ်မှူးအသစ်ပါဝင်သည် အလင်းအိမ်သစ်ရိပ်သစ်မြေပြင်ပြန်လည် controls.Read ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ SkySpirit2011, repaints နှင့် Dagobert, သူ Mike Maarse အားဖြင့် soundset အားဖြင့် repack
ဘိုးအင်း 737 ဂန္ထဝင် Multi Livery Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 64 111
ဤတွင်ဘိုးအင်း 737-300 + Winglets, 737-400, 737-500 + Winglets င်တစ်ဦးကျိကျိတက် pack ကိုအလွန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်များဇာတိများဖြစ်ကြ FSX / P3D နှင့်သဟဇာတ Prepar3D v4 ။ GPWS, FMC, မြေပြင် Utility ကို, ဆီစွတ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Autoland နှင့်အတူတိုးမြှင်ကို virtual cockpit (FSND 737-800) တို့ပါဝင်သည်။ ဤသည် pack ကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ လင်းယုန် Rotorcraft ခြင်း simulation, ဂျော့ခ်ျ A.Arana, Alejandro Rojas Lucena, Rikoooo အားဖြင့်အထုပ်
ဘိုးအင်း 727-200 DHL FedEx FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 33.8 ကို MB
နှစ်ခုအဓိကသယ်ဆောင် DHL နှင့် FedEx ရဲ့အရောင်အဆင့်မြင့်ရဲ့ Virtual cockpit နှင့် FMC နှင့်အတူဘိုးအင်း 727-200, သင်ကမ္ဘာတဝှမ်းကုန်ပစ္စည်းများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်ရှိသနည်း ထုံးစံနှင့်အတူအပြီးအစီးအထုပ်, VC နှင့် 3D မော်ဒယ်အသံ။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ သောမတ်စ်ရုသ် Tenkuu Developers စတူဒီယို, လူး Quintero, Garret Smith ကလူး Perina, ဒိန်ခဲ Strike, စုရုံးခဲ့ခြင်းနှင့်အဘို့ပြင်ဆင် P3D/FSX ခရစ်အီဗန်အားဖြင့်
ဘိုးအင်း 757-200 Donald Trump FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 29 657
Size: 88 ကို MB
သင်ဘီလျံနာဒေါ်နယ်ကို Trump ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဂျမ်ဘိုပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ရှိကြောင်းသိခဲ့ပါသလော သငျသညျ Rikoooo အားဖြင့်သင်တို့၏လေယာဉ် Simulator ကိုအတွက်ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လေယာဉ်ပျံပျံသန်းနိုင်သည် interior.Now ဒါဟာလေယာဉ်အသေးစိတျ 757D panel က (ကျယ်ပြန့်မျက်နှာပြင်), အခြေခံပညာ VC ကို, FMC, GPWS, တို့ပါဝင်သည်, ဇိမ်ခံနှင့်အတူတစ်စိတ်ကြိုက်ဘိုးအင်း 200-2 ရဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ စီမံကိန်း Opensky, repaint: Andre Ludick, panel ကို:, G Munro, အသံ: အာဒံကို Murphy
ဘိုးအင်း P8-တစ်ဦးက Poseidon မှာ FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 23 449
Size: 54.4 ကို MB
မိုးရွာရွာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတိုးတက်လာ VC ကိုလည်းပါဝင်သည်ထုံးစံအသံ, ကို virtual cockpit, 8D panel က, Animation, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, အလုပ်လုပ် Wiper (switch ကိုပေါ်မှာ right mouse ကိုကလစ်နှိပ်) နှင့်ဘိုးအင်း P2-A Poseidon မှာနာယကနှစ်ဦးလေး "Batmen" အထုပ်။ LCD screen, EICAS, PFD, MFT ဘို့ switches ။ Autobrake switch ကို။ လေယာဉ်မှူးပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ cabin L ကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Alejandro Rojas Lucena နေဖြင့်တိုးမြှင့် TDS ကမော်ဒယ်စုရုံးခဲ့ခြင်းနှင့်အဘို့ပြင်ဆင် FSX ခရစ်အီဗန်အားဖြင့်
ဘိုးအင်း B-52H CONECT ပက်ကေ့ FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 12 264
Size: 36.5 ကို MB
ဒါကဖြစ်ပါသည် FSX/P3D သာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် FS2004 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ မူရင်းမော်ဒယ် FS2004 များအတွက် AlphaSim, Ltd အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ ဒါဝိဒ်သည် Robles.This လေယာဉ်တစ်စင်းအားဖြင့် CONECT စီးရီး B-52H မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်အပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည် FSX Acceleration နှင့်အတူရွှေစင်, Prepar3Dv2.5 နှင့် Prepar3Dv3 ။ တွဲဖက်မ P3D v4 + အဆိုပါ CONECT ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ AlphaSim, ဒါဝိဒ်သည် Robles အားဖြင့် update ကိုအားဖြင့်မော်ဒယ်
ဘိုးအင်း 777-200ER Ultimate Pack ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 120 928
Size: 297 ကို MB
Hanzalah Ravat အားဖြင့်ဘိုးအင်း 777-200 ဗားရှင်း Ultimate Pack ကို။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အလုပ်အဖွဲ့ LNAV နှင့် GPWS ။ ရရှိနိုင် VC ကိုမော်ဒယ်။ POSKY အားဖြင့်မော်ဒယ်။3စစ်မှန်သောအသံအစုံပါရှိသည်။ ခရီးသည်နှင့်ယာဉ်အမြင်များနှင့်အတူတည်းဖြတ် Aircraft.cfg ။ ဒါ့အပြင်အလုပ်အဖွဲ့ DSP နှင့်အတူ (PFD တွင်) ကအလုပ်အဖွဲ့ EFIS, V1 VR V2 နှင့်ခတ်မြန်နှုန်းပါရှိသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Project မှ OpenSky, Hanzalah Ravat အားဖြင့် update ကို
ဘိုးအင်း 747-8i Air ကိုတရုတ်ပက်ကေ့ FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 44.9 ကို MB
တိုးတက်လာသော VC ကိုအတူ Pack ကိုဘိုးအင်း 747-8I Air ကိုတရုတ်။ တရုတ်ကတရားဝင်ခရစ် Evans.Air တရုတ်ကစုဝေးနှင့် edited, Rikoooo တစ်ဗူးရည်စူးအပ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်, 2014 အတွက်ရှေ့ဆက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပထမဆုံးကမ္ဘာကစီးပွားရေးပါဝါဖြစ်လာခဲ့သည်တရုတ်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် .. ။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ SkySpirit2011, Alrot, စုရုံးခဲ့ခြင်းနှင့်အဘို့အ edited FSX ခရစ်အီဗန် & Enrique Cornejo အားဖြင့်
ဘိုးအင်း 747-8i Air Force One Package ကို FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 43 911
Size: 80.8 ကို MB
Air Force One သမ္မတစင်းကိုသမ္မတနှင့်သူ့အဖွဲ့တတ်နိုင်သမျှနိုင်အောင်အထူးတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် refurbished နှစ်ခုဘိုးအင်း 1990 လည်းပါဝင်သည်, United States.Since 747 ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်သည့်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေတပ်မဆိုလေယာဉ်ပျံများ၏ခေါ်ဆိုခလက္ခဏာသက်သေဖြစ် မီတာစဉ်ပြင်သာပြောင်းသာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာရွှေ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Enrique Cornejo တည်းဖြတ် SkySpirit2011, Alrot, Rikoooo အားဖြင့်ပြုပြင်ထားသော & fixed, Air Force One Dagobert အားဖြင့် repaint